भोजपुरी गीतलाई यति मिठो रिमिक्स गरे नाइजेरियन गायकले, गीत सुन्नुस् मोहित बन्नुहुनेछ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भोजपुरी गीतलाई यति मिठो रिमिक्स गरे नाइजेरियन गायकले, गीत सुन्नुस् मोहित बन्नुहुनेछ
काठमाडौं। नाइजेरियाका एक गायक अहिले भोजपुरी गीतका कारण चर्चामा छन् । सामुएल सिंह केही समय अगाडिदेखि भारतका क्षेत्रीय भाषाका गीतहरु गाउँदै आएका छन् । तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, ओडिशा लगायतका क्षेत्रीय भाषाका गीतहरु गाउने सामुएलले हालै एउटा भोजपुरी गीत गाएका छन् । यो गीतलाई उनले ओरिजिनल गीतभन्दा केही फरक तरिकाले रिमिक्स गरेका छन् । १६ वर्ष पहिले मनोज तिवारीले गाएको भोजपुरी गीत ‘रिंकिया के पापा’लाई अहिले सामुएल सिंहले रिमिक्स गरेका हुन् । सुन्नुहोस् मनोज तिवारीको स्वरमा ओरिजिनल गीत –
अहिले सामुएलले त्यसको रिमिक्स बनाएका हुन् जसलाई धेरै मन पराइएको छ । रिंकिया के पापा गीत २००२ मा रिलिज भएको थियो । गायक, हिरो तथा राजनीतिज्ञ मनोत तिवारीको एलबम ‘पूरब के बेटा’मा यो गीत संग्रहित थियो । सामुएल सिंह २०१० मा क्यान्सरको उपचार गराउन भारत आएका थिए । क्यान्सरका कारण उनको बायाँ हात काट्नुपरेको थियो । भारत बस्ने क्रममा उनले भारतीय संगीत सुने र उनलाई यो मन पर्यो । सुन्नुहोस् सामुएल सिंहले रिमिक्स बनाएर गाएको गीत –
उनलाई खास गरी यहाँको क्षेत्रीय संगीत मन पर्यो । त्यसपछि २०१२ मा सामुएल पढ्नका लागि भारत आए । रिपोर्टका अनुसार उनले राजस्थानको जयपुरमा सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा पवन सिंहको चर्चित भोजपुरी गीत ‘ललिपप लागेलू’ गाएका थिए । यो गीत गाउँदा दर्शकको उत्साह देखेपछि उनी गायन क्षेत्रमा अघि बढ्न थाले । अहिले युट्युबमा सामुएल सिंहको च्यानल छ जहाँ डेढ लाखभन्दा धेरै सब्सक्राइबर छन् ।